Qalabka Dheemanka, Qalabka Mashiinka PCD-ga, Qalabka Macdanta PCD - Dunida
Xoogga saar Adeegga Gawaarida
Jiangxi Earth Superhard Tools waa qalab tayo sare leh oo shiineys ah oo shiineys ah oo soosaara u heellan alaabtayada dhismaha iyo warshadaha dhagaxa muddo tobanaan sano ah. Khadadkayaga waxaa ka mid ah qalabka wax lagu shiido ama lagu nadiifiyo Dheemanka iyo PCD, Blades Sawireed Dheemman, Dhex-dhexaadiyaha Muhiimka ah, Mashiinka Mashiinka Gogosha, Xarkaha loo yaqaan 'Resin Pads' oo dhammaantood si ballaadhan loogu adeegsado qayilaadda la taaban karo, diyaarinta dusha sare iyo goynta miisaska iyo sidoo kale beeraha Been Abuurka.
Kali Row Cup shiidi Wheel JD1-1-5
Kali Row Cup shiidi Wheel JD1-1-4
Kali Row Cup shiidi Wheel JD1-1-3
Double Row Cup shiidi Wheel JD1-1-2
Waxaan sidoo kale siinaa faa'iidooyin waaweyn dhammaan macaamiisheenna, labadaba kuwa cusub iyo kuwa soo laabanaya. Xor ayaad u tahay inaad hubiso sababo badan oo aad ku noqon karto macmiilkeena oo aad u leedahay khibrad iibsi aan dhib lahayn.
Gawaarida la xaqiijiyay oo noocyo iyo cabirro kala duwan leh
Saamiga sarreysa ee amaahda iyo qiimaha oo lagu daray alaabooyin badan
Akhbaarta Booqashada Macaamiisha
Dhulku shiidi doono waxaa loola jeedaa daaweynta shiidi / dhagax / terrazzo / epoxy dhulka
Dhulku shiidi doono waxaa loola jeedaa daaweynta shiidida / dhagaxa / terrazzo / epoxy dhulka, kaasoo si wax ku ool ah u nadiifiya terrazzo, dusha sare oo la taaban karo, lakabka hoobiye epoxy iyo dhulka saliida duugga ah, iwm. Dabaqa markii ugu horeysay ...
Laga bilaabo Febraayo 5-teeda ilaa 20-keeda, waxaan u dabaaldegi doonnaa iidda guga inta lagu jiro xilligan. Waan ka xumahay wax kasta oo aan adiga kugu habboonayn oo fadlan si xor ah u ila soo xiriir haddii aad si dhakhso leh u hesho jawaab ...
Festival Sanadka Guga 2020 Macaamiisha qaaliga ah, Laga bilaabo Febraayo 5-teeda ilaa 20-keeda, waxaan u dabaaldegi doonnaa dabaaldegga guga inta lagu jiro xilligan. Waan ka xumahay wax kasta oo aan adiga kugu habboonayn oo fadlan si xor ah u ila soo xiriir haddii aad si dhakhso leh u hesho jawaab. Waxaan jeclaan lahaa inaan fursaddan uga faa'iideysto adiga iyo adiga ...